In ka badan 130 ayaa ku dhintay Lampedusa - BBC Somali
In ka badan 130 ayaa ku dhintay Lampedusa
Image caption ilaa boqol iyo konton ayaa la badbaadiyay
Ugu yaraan 130 qof oo Afrikaan ah ayaa ilaa hadda meydkoodi la helay, qaar kale oo badanna waa la la'yahay kadib markii dooni ay saarnaayeen ay kula degtay meel u dhaw xeebta jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga.
Waxaa nolol lagu badbaadiyay ilaa 150, hase ahaatee waxaa wali maqan 200 oo kale. Dadkaasi inkasta oo aan faahfaahin buuxda laga heyn, waxaa la sheegay inay u badan yihiin Eritrean iyo Soomaali.
Badhasaabka jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaniga ayaa sheegay in dadka la badbaadiyay laga soo saaray badda, ka dib markii ay halligantay dooni ay saarnaayeen ilaa 500 oo qof oo ah tahriibayaal Afrikaan ah.
Image caption ilaa 130 ayaa ku dhintay badda
Waa markii labaad ee toddobaad gudihiisa ay dad Tahriibayaal ah ku dhintaan baddaasi.
Dadka halkaasi ku dhintay sida wararku ay sheegeen waxa ka mid ahaa dumar uur leh iyo caruur. Waxaana la aaminsan yahay in ay ka soo kicitameen Libya markii ugu dambeysay.